ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် သုံးစွဲနေသူများကို ပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီး၊ ၇၆ ဦ? - Yangon Media Group
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ် သုံးစွဲနေသူများကို ပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီး၊ ၇၆ ဦ?
ကျောက်ဆည်၊ သြဂုတ် ၂၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရှိ မူးယစ်ကျော်စောနေရာများကို သြဂုတ် ၂၇ ရက် ညနေပိုင်းနှင့် သြဂုတ် ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတို့တွင် ကျောက်ဆည်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ခရိုင်နှင့်မြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချသူတစ် ဦးနှင့်သုံးစွဲသူ (၇၆)ဦးတို့ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”သိမ်းငှက်စီမံချက်အကောင် အထည်ဖော်နေစဉ်မှာ မန္တလေးမြို့ရဲ့ ပြင်ပမြို့နယ်တွေလည်း တစ်ပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ဖို့ တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲ့ စီမံညွှန်ကြားချက်အရ ကျောက်ဆည်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ယာယီရဲမှူးကွပ်ကဲပြီးတော့ မြို့နယ်မှူးတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်း တွေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ အခုလိုဖမ်းဆီးရမိအောင် တာဝန်သိကျေးရွာသားတွေကလည်း ပူး ပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ မနေ့က လက်ပံကျေးရွာမှာ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသူ (၇၆)ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာ တော့ မူးယစ်ဆေးရောင်းချသူတစ်ဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်” ဟု ကျောက်ဆည်မြို့မရဲစခန်းမှ ယာယီစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးသန်းကျော် ဌေးက ပြောကြားသည်။
ကျောက်ဆည်မြို့မရဲစခန်းမှူး ဦးစီးဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောက်ဆည်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအုပ်အောင် ကျော်သန်းဦးစီးသော ဖမ်းဆီးရေး အဖွဲ့သည် သြဂုတ် ၂၇ ရက် ညနေ ၃နာရီက ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ လပ်ပံကျေးရွာအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ဝယ်ယူသုံးစွဲရန်ရောက်ရှိနေ သော မသင်္ကာသူအမျိုးသား (၇၄) ဦးနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့အား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား ကျောက်ဆည်မြို့မရဲစခန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လူဦးရေများပြားသည့်အတွက် အချုပ်ခန်းမဆံ့သဖြင့် မြစ်သားမြို့နယ်၊ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်နှင့် တံတားဦးမြို့နယ်ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများသို့ ခွဲဝေချုပ်နှောင်ထားရသည်။
အလားတူ ကျောက်ဆည်မြို့မ ရဲစခန်းမှူး ဦးစီးဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့သည် သြဂုတ် ၂၇ ရက် ညနေ ၄ နာရီခွဲက ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ တောင်နောက်အုပ်စု၊ ကျောင်းရွာအနီး သင်္ချိုင်းကုန်းချုံတောအတွင်း ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအား မသင်္ကာဖွယ် တွေ့ရှိသဖြင့် စစ်ဆေးရာ ချုံတော အတွင်းမှ ဆိုင်ကယ်အမှတ် ၂၄ ယ/—–KENBO 125 နီနက် ကျားအား တွေ့ရှိရပြီး ယင်းဆိုင်ကယ်အနီးတွင် အဖြူရောင်ပလတ် စတစ်ပိုက်အတွင်းထည့်လျက် ၈၈။၁ စာတန်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား ၁၇ ပြား အလေးချိန် ၁ ဒသမ ၇ ဂရမ်ခန့်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲရာတွင် အသုံးပြုသည့် ရေဘူးတစ်ဘူး၊ဆိုင်ကယ်တူးဘောက်အတွင်းမှ အထိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့အား ပိုင်ရှင်မဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ကျောက်ဆည်မြို့မရဲစခန်းက မယ(ပ)၂ဝ/ ၂ဝ၁၈၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ ဥပဒေပုဒ်မ-၁၆(ဂ)ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားသည်။
သြဂုတ် ၂၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီခန့်က မူးယစ်ဆေးဝါးကွင်း ဆက်သတင်းအရ ကျောက်ဆည် မြို့ဘောဂဝတီအုပ်စု၊ မြို့မဦးကွက်သစ် အရှေ့ပိုင်းနေ အောင် ကြီး(ခ)အောင်ဆန်းဦး အသက် (၂၇)နှစ်၊ နေအိမ်အား ကျောက်ဆည်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ မှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အသိသက်သေတို့နှင့်အတူ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ ၎င်းနေအိမ် အိပ်ခန်းအဝင်ပေါက် ယာဘက် ဘေးတန်းတွင်ချိတ်လျက် BORAEMON စာတန်းပါ ရေခဲအိပ် အပြာရောင်အတွင်းမှ ၈၈။၁ စာတန်းပါ ပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေး ပြား (၁၉၉) ပြားနှင့် အစိမ်းရောင် တစ်ပြား (၁၂)ထုပ်၊ ကာလတန်ဖိုးကျပ်သိန်း ၆ဝဝဝဝဝဝ ခန့်တွေ့ရှိ ခဲ့ပြီး ၎င်းစီးနင်းအသုံးပြုသည့် နံပါတ်မပါ HONDA CLICK- 125 (စစ်စိမ်းရောင်)ဆိုင်ကယ်တူး ဘောက်အတွင်းရှာဖွေရာ မြန်မာ ငွေရောရာ ငွေကျပ် ၁၅ဝဝဝဝ ခန့်တွေ့ရှိသဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချရန်အလို့ငှာ လက်ဝယ်ထားရှိသူ အောင်ကြီး(ခ)အောင် ဆန်းဦးအား မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၉(က)/၂ဝ(က)ဖြင့် အမှု ဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
ဘဏ္ဍာငွေ ခွဲဝေမှု အတည်ပြုရန် စစ်ကိုင်းလွှတ်တော် အရေးပေါ်စည်းဝေး
ဧရာဝတီတံတား (မကွေး)ကို ယာယီပိတ်၍ ပြုပြင်မှု လုပ်ဆောင်မည် ဆိုသည်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း တံတားအထူ
အာဖဂန်တွင် တာလီဘန်များ၏ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရေး ဓာတ်ခွဲခန်းများကို အမေရိကန် လေတပ် တိုက်ခ??
တောင်တွင်းကြီး၌ အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦး ရထား ကြိတ်ခံရပြီး သေဆုံး
မိမိပိုင်နေအိမ်အား မီးပြန်ရှို့သည့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို အရေးယူ